Fianakaviana : ny zanaka, vokatry ny tsodranon’Andriamanitra
Naseho ny : 5 febroary 2020
Na inona na inona ny fihevitry ny reny ny amin’ny nahatonga azy nitoe-jaza dia tsodranon’Andriamanitra ny zanaka. Noho izany melohin’ny Papa François ny herisetra ara-batana na ara-moraly atao amin’ny ankizy. Fanazavana ny katesizin’ny Papa François momba ny anjara toeran’ny ankizy iarahana amin’ny Père Fenohasina Dorysse Randrianjatovo.
Naseho ny : 18 janoary 2020
Mametraka tsiahy tsy azo vonoina ao amin'ny tanora ny tenin'ny zokiolona. Ary mankahery azy ireo amin'ny fotoana sarotra. Katesizin'ny Papa François momba ny anjara toeran'ny zokiolona miaraka amin'i P Justolat Rafaralahimboa.
Pejy 1 amin'ny 6